मनिषा कोइरालाको प्रश्‍न: यो सरकार के नेपालीको सरकार नै हो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मनिषा कोइरालाको प्रश्‍न: यो सरकार के नेपालीको सरकार नै हो ?
मनिषा कोइरालाको प्रश्‍न: यो सरकार के नेपालीको सरकार नै हो ?
पुस २७ गते, २०७७ - १७:०४
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले २९९ औं पृथ्वी जयन्ती मनाउन निस्किएकामाथि प्रहरी धरपकड गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्।
सोमबार दिउँसो उनले ट्वीट गर्दै पृथ्वी जयन्ती मनाउन निस्किएको ठाउँमा पानीको फोहोरा र टियर ग्यास सहितको प्रहरी तैनाथ भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्।
उनले ट्वीटरमा लेखेकी छन्, ‘मैले आशा गरेकिथिए क़ि जनताको राष्ट्रीय एकता प्रतीकों सामूहिक भावलाई सरकार ले सम्मान गर्ने छ । तर उसको व्यवहार ठीक उल्टो देखियो । पृथ्वी नारायणको शालिक अगाडी नै सरकार को यो आपत्तिजनक कार्य ? पानीको फोहरा र टियर ग्यास सहितनै तैनात प्रहरीलाई पठाउने, सरकार के नेपालीको सरकार नै हो ?
सोमबार विविध कार्यक्रम गरी पृथ्वी जयन्ती मनाइएको छ। काठमाडौंमा पनि र्‍याली निकालेर कार्यक्रम मनाइएको थियो।
सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा माल्यार्पणको गर्ने क्रममा प्रहरीले त्यस क्षेत्रमा जान रोक लगाएको थियो।
पुस २७ गते, २०७७ - १७:०४ मा प्रकाशित